Abaququzeleli beDraw Drawer -IiGenius Drawers ozifunayo ekhayeni lakho - Uyilo Lokuphefumlela
Yintoni Eyenza Indlu Ibe Nhle
Abaququzeleli beDraw Drawer -IiGenius Drawers ozifunayo ekhayeni lakho
Ngokuqinisekileyo unazo zonke izinto ezisemgangathweni ozigcinileyo, njengempahla yasekhitshini, iimpahla, kunye netawuli ezongezelelweyo, kodwa uthini ngazo zonke izinto ezingaphezulu imfuno igumbi, kodwa ngokwesiko akufakwa kwiidrowa? Ezi zitshixo ziyimpendulo kuyo yonke into yakho yokugcina yeha . Ukusuka kwindawo yokugcina izixhobo zakho ezishushu, ukuya kwisikhululo sokutya, ukuya kwindawo emanzi-iindwendwe azinakuze zilindele ukuba zithini ngaphakathi kwabaququzeleli bokuyila.
Jonga igalari Shumi elinantlanuIifoto Ifoto kaChristian Garibaldi 1I-15Umququzeleli webhotile emanzi
Ukuba awufuni ukugcina bonke utywala bakho ngaphandle kwisiboniso esipheleleyo, lo mququzeleli wedraw unendawo yeebhotile ezili-16. Kwaye, amagumbi ngamanye ayathintela iibhotile ekutshintsheni nasekuncamathelaneni.
Bona ngakumbi kwi Uyilo lukaHeidi Piron .
Isilayidi MbiniI-15Iimbiza kunye neepani
Ukufumba iimbiza kunye neepani zakho kwikhabhathi kukhokelela kwimikrwelo kwaye yintloko epheleleyo yentloko ukuze uhlaziye ngokukhawuleza. Kodwa isisombululo sokugcina sinokubamba ukuya kwi-100 yeepawundi, kwaye kuthetha ukuba awusoze uphinde ulwe ne-cookware kwakhona.
THENGA NGOKU $ 131, amazon.com
ngaphandle kwemibono yokuhombisa ukuwa
Uhlaziyo-Shelf 3I-15Isigcini sokuGcina ukuTya kokutya
Akukho nto yenza ukucocwa emva kwesidlo sangokuhlwa kuphazamise ngakumbi kunemfumba yeziciko zokugcina kunye nezikhongozeli ezingadibaniyo. Kodwa lo mququzeleli uya kukunceda ugcine upholile. Izahluli ezinokuhlengahlengiswa zikuvumela ukuba wenze idrowa yakho ngokwezifiso ukuze ilingane iimfuno zakho.
THENGA NGOKU $ 202, amazon.com
UJason Donnelly 4I-15Isikhululo se-Snack
Yoneliseka yiminqweno yakho yokutya okungafuneki ngokutsala okugcweleyo ngoluhlobo Ikhitshi elinomoya . Musa nje ukuthembela ekuhlaleni ngokupheleleyo ixesha elide.
UTrevor Tondro 5I-15Imfihlo Bar
Iyure emyoli yonwabile kancinci. Kunye idrowa ebandayo ngokukhawuleza Ukusela iziselo, kukho lonke igumbi kwifriji yehor d'oeuvres.
iindawo ezincinci imibono ephilayo
I-ANIIE Yimbi 6I-15Abahluli bePeg
Iimpawu ezicocekileyo ziyabuqonda ubuhle beekhitshi ezihlengahlengisiweyo zabaququzeleli. Ngokuxhoma iipigbhodi ezantsi kwidrowa, iidowels zomthi zigcina iipleyiti nezitya ngaphakathi nje indawo elungileyo.
Ukuhombisa iikhabhathi 7I-15Umququzeleli weK-Cup
Ukuthatha isigqibo phakathi kwePumpkin Spice kunye ne-Italian Roast kuya kuba nzima kancinci xa yonke ikofu yekhofi isesandleni sakho. Yisebenzise njengesizathu sokwenza ikomityi yesibini.
Bona ngakumbi kwi Ukuhombisa iikhabhathi .
JOAT-London 8I-15Iikhabhathi Phantsi kweZitebhisi
Hayi, hayi ireferensi kaHarry Potter. Ukuba akukho ndawo yaneleyo yekona yemidlalo emnandi okanye yokufunda i-nook, yongeza indawo yokugcina eyakhelweyo kwezo zingangqinelani kunye neziphelo ezihlala zingenakhaya.
Bona ngakumbi kwi JOAT-London .
Ukutya kwehalloween kwabantu abadala
UAnnie Schlechter 9I-15Ibhonasi yePantry
Kutheni ungagcini konke ukupheka kwakho izinto ezibalulekileyo kwivenkile encinci ecaleni kwefriji? Isidlo sangokuhlwa sangokuhlwa sifike ngokukhawuleza okukhulu.
Indlela yeMthi 10I-15Ukuma kwenja
Enye indlela yokuqinisekisa ukuba umntwana wakho akasityhaleli isitya sabo sokutya phakathi ekhitshini? Yifake kwidrowa eya kuhlala kwindawo enye. Ndiyathemba ukuba oku kuya kukhokelela kwimigxobhozo emincinci engacwangciswanga, nayo.
Bona ngakumbi kwi Indlela yeMthi .
Uyilo lweSicora Shumi elinanyeI-15Isixhobo eshushu sokupholisa iRack
Akukho nto ikhathazayo njengokuzitshisa ngentsimbi njengoko iphola ikhawuntari. Kodwa le drawer imxinwa iyabakhusela kwindlela eyenzakalisayo, kwaye iluncedo ngokukodwa kubantu abanabantwana abancinci.
Bona ngakumbi kwi Uyilo lweSicora .
izinto ezipholileyo kumagumbi okulala
Iifama zeNtshontsho 12I-15Indawo yokuBala yeBhonasi
Abantu abanale khitshi banesifo esincinci, nikela ingqalelo: Le drawer ikrelekrele inika sonke isithuba esifunekayo sokusika-kwaye ngekhe ulahle izinto ezilahliweyo endleleni eya emgqomeni, kuba kukho isipaji esinobuchule embindini wale bhodi yokusika.
iintyatyambo ezintle ezinamagama
Bona ngakumbi kwi Iifama zeNtshontsho .
IFlickr Creative Commons / litlnemo 13I-15Ibhodi yoku-ayina i-Hider
Olu qhekeko lufihla i Ibhodi yoku-ayina emva komnyango kujongeka njengeyure engahlawulwayo. Kanangcono? Iqengqeleka ngaphandle kwamehlo xa ingasetyenziswa, ukuze usebenzise le nto yokuqhekeza kwigumbi lakho lokuhlamba (okanye nakwigumbi lakho lokulala) ngaphandle kokonakalisa uhombiso.
UYILO LOPHAWULELO NOKUSETYENZISWA 14I-15Ibhloko yeBloko
Oku isisombululo sokugcina ugcina izixhobo zasekhitshini ezibukhali ekhawuntareni kwaye kude nezandla zomncinci-qiniseka nje ukuba ulahla ukhuseleko kwisibambo.
Bona ngakumbi kwi Uyilo loTyikityo kunye nokuchwela .
Icala eliliPhezulu Shumi elinantlanuI-15Impahla iyaphazamisa
Phakamisa isandla ukuba Igumbi lokuvasa Impahla ligumbi elinye wena soze bonisa iindwendwe — mhlawumbi ngenxa yokuba isoloko izele ziibhaskithi eziphuphumayo. Ukuba uzama oku kuhlaselwa, uya kuzidla ngokubonisa indawo yakho ebonakalayo (sithembe).
Bona ngakumbi kwi Icala eliliPhezulu .
OkulandelayoIikhikhi ezili-15 zeRustic Unako ukukhupha ngokupheleleyo Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiULauren Smith McDonough Umhleli oMkhulu ULauren ungumhleli ophezulu kwi-Hearst. USienna Livermore Umhleli woRhwebo USienna Livermore ngumhleli wezorhwebo kwi-Hearst egubungela iimveliso ezithengisa kakhulu, izinto zasekhaya, ifashoni, ubuhle, kunye nezinto ongenakuphila ngaphandle kwazo.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
isisombululo sokugcina ikhitshi elincinci
ukongeza ubume eludongeni
yintoni ipeyinti yelaphu
uninzi lweedolophu zamachibi ezifikelelekayo
Uyilo lweelambu ze-jack kulula